Nepali Sex Zone: पहिलो सेक्स अनुभव 1
मेरो घर धरानमा पर्छ । म हाल १७ वर्षकी भएँ । मेरो मामाको घर काठमाडौं गोठाटारमा पर्छ । आजभन्दा ठीक एकवर्ष अघि म मामाको घर काठमाडौंमा गएको थिएँ । माइजू विरामी भएकोले २÷४ दिन बस्न मामाले अनुरोध गर्नुभयो । माइजू हस्पिटलमा रहनुभएकी हुँनाले मैले वेलावेलामा माइजूलाई खाना पुर्याउँनु पर्ने भयो । त्यसर्थ म मामाघरमा केहीदिनको लागि बसें
मेरो माइजूलाई राखेको हस्पिटलमा अरु पनि धेरै विरामीहरु थिए । माइजूको नजिकै एकजना विरामी थिए । उनको कुरुवाको रुपमा उनका छोरा रहेछन् । संयोगबस ती विरामी र माइजूको घर नजिकै पर्दो रहेछ र खाना लिन जाने बाटो एउटै पर्दो रहेछ । एकदिन ति विरामीका छोरा र मेरो बाटोमा भेट भयो । एकआपसमा २÷४ दिनदेखि देखाभेट भएकोले कुनै समस्या भएन । ती विरामी कुरुवा केटा लगभग २० वर्षका थिए । उनको शरीर अग्लो र स्लीम परेको थियो । हामीहरु गफ गर्दै गयौं । उनले मलाई भित्रभित्रै मेरो हाउभाउ विचार गर्ने गर्दा रहेछन्
मेरो उमेर पनि कलिलो र जिउडाल राम्रो थियो । उनी मलाई मेरो शरीर एकटकले हेर्ने गर्थे । मेरा पुष्ट छाति र ठूलो कम्मर हेरीरहन्थे । एकदिन मैले मेरो माइजूको लुगाकपडा लिन घर जानु पर्यो र मामाले मलाई घरमा राखेर हस्पिटल आउनु भयो । ती केटा पनि त्यो थाहा पाएर घर आएका रहेछन् । मामा, माइजू घरमा नभएको मौका पारेर ती केटा मामाको घरमा आए । मैले उनलाई सम्मानसाथ चिया पिलाएँ । माघको दिन भएकोले जाडो निकै थियो । ती केटाले मामाको परिवारको फोटो हेर्ने इच्छा राखेर फोटोको एल्बम माग्यो । मैले फोटाको एल्बम लिएर उसलाई दिएँ तर उसले मलाई फोटोहरु चिनाउँन आग्रह गरेर छेउमा बस्न भन्यो । त्यसर्थ एल्बममा भएका फोटोहरु चिनाउँन म उसको छेउमा बसेँ । उसले एल्बमका फोटोहरु पल्टाउँदैं हेर्न थाल्यो । एल्बमबाट फोटोहरु पल्टाउँदा एकपटक उसको कुहिनोले मेरो स्तनमा छोयो । मलाई कुतकुती लाग्यो । उसले त्यसै गर्दा पुनः उसको कुहिनोले मेरो स्तन छोयो । अब उ मेरो झन् नजिक आउँन थाल्यो र उसको कुहिनाले अब मेरो पुष्ट स्तनमा छुन थाल्यो
मलाई कताकता कुतकुती लागि रहेको थियो र मेरो आङ्ग पनि सिरिङ्ग भई रहेको थियो । उसले अब मेरो स्तनमाथि कुहिनो राखेर धक्का दिन थाल्यो । म भरखर १६ वर्ष पुगेकी तरुनी युवती भएकी र कसैले मेरो स्तनमा आजसम्म नछोएकोले गर्दा मलाई कस्तोकस्तो अनुभव भइरहेको थियो । मेरो स्तन पनि ठूलो र साह्रो थियो । मैले स्तनमा कसिलो ब्रा लगाएको हुँदा मेरो टि सर्टबाट स्तन माथि उठेको थियो । पुष्ट स्तन भएकोले उसको कुहिनोले मेरो स्तनमा धक्का दिदाँ मलाई कताकता आनन्द भए जस्तो लाग्न थाल्यो । उसलाई विचार गर्दा उ पनि फोटो हेर्ने निहूले मेरो स्तन मसाज गर्न व्यस्त थियो र उसको अनुहार रातो भएको थियो । यसरी पटकपटक उसको कुहिनोले मेरो कसिलो स्तनमा धक्का दिदाँ मलाई अत्यन्त मज्जा आउँन थाल्यो र मेरो तल योनीबाट पानी बग्न थाल्यो । यसो उसको तल हेरेको त पेन्टबाट उसको लाँडो ठन्केर माथि उठेको रहेछ । अब उसलाई पनि खपी नसक्नु भइसकेको रहेछ । उसले त अव कुहिनोले स्तनमा धक्का दिन छोडेर दुबै हातले मेरो कसिलो स्तन माड्न थाल्यो । अब भने मलाई पनि खपी नसक्नु भयो । मेरो पुतीबाट पानी बगेर मेरो पेन्टी पुरै भिजेर मेरो पेन्टमा समेत लाग्न थाल्यो । उसले मेरो स्तन माड्दै मेरो टि सर्ट खोल्यो अनि कोठाको ढोका लगायो र मलाई विस्तारै ओछ्यानमा सुतायो । उसले मेरो पेन्ट पनि खोलिदियो । अब मेरो शरीरमा लुगा टु पीस मात्र बाकी रह्यो । उसले मेरो रातो ब्रा भित्र रहेको ठूलो र माथि उठेको कसिलो स्तन एकटकले हेर्यो र उसको हातले मेरो हात समाती उसको लाडोमा राख्यो । अनि विस्तारै ब्रा माथिबाट माड्न थाल्यो । घरिघरि मेरो हात समातेर लाडोमा दल्न थाल्यो । उसले मेरो स्तन माड्दै तल पुतीमा पनि खेलाउँन थाल्यो । केहीबेरमा उसले उसको जम्म ै लुगा खोल्यो । उसको लाडो ठनक्क भएर ठन्केको थियो । मैले आजसम्म कसैको लाडो नदेखेको हुँदा मलाई अचम्म लाग्यो कि केटाको लाडो ठन्कदा कत्रो ठूलो हुँदोरहेछ
एकछिन पछि उसले मेरो ब्रा र पेन्टी दुवै खोल्यो र अव म पुरै नाङ्गो भएको थिए उ पनि नाङ्गै थियो । उसले मेरो दुधको मुन्टा खेलाउँदै चुस्न थाल्यो र उसको ठन्केको लाडो पनि मेरो मुखमा दल्न थाल्यो ।अनि उसले मेरो दुवै खुट्टा फटाएर पुती चुस्न थाल्यो । अव भने मलाई सही नसक्नुभयो । मैले उसको बेस्करी ठन्केको लाडोलाई मेरो मुखमा ग्वाम्मै हालेर चुस्न थाले । उसले मेरो पुती चुस्न थाल्यो, म उसको लाडो चुस्न मस्त रहें । केही बेर त्यसो गरेपछि उ म मािथ चढ्यो र उसको अत्यन्त ठन्केको लाडो मेरो पुतीमा हाल्न थाल्यो । लाडो खेलाएको नै पहिलो पटक भएकोले मलाई त्यती अनुभव थिएन । उसले लाडो मेरो कसिलो पुतीमा छिरायो तर मलाई पहिलो पल्ट भएकोले रहेछ बहुत दुख्यो । उसले एकछिन सहुन एकैछिनमा जाती भइहाल्छ भन्दै धक्का मार्न थाल्यो । साच्चै मलाई केही बेरमा दुख्न छोड्यो र अत्यन्त मज्जा अनुभव हुन थाल्यो । उसले मेरो दुवै दुधको मुन्टा चुस्दै ग्वाम्ग्वाम हाल्न थाल्यो र दुवै हातले मेरो पिठ्यूमा च्याप्प समात्यो अनि मैले पनि दुवै खुट्टा फटाएर उसलाई तलबाट धक्का दिदैं अगाँलोमा कसें । मैले चिक्दा त्यस्तो मज्जा र आनन्द हुन्छ भन्ने कुरा सपनामा पनि सोचेकी थिइन । यसरी हामीले घरी उ माथि घरी म माथि भएर ग्वाम्ग्वाम चिक्यौं । लगभग १० मीनट चिकेपछि उसले उसको लाडोबाट सेतो पानी मेरो नाइटो वरिपरि झारिदियो । मेरो पुती पुरै पानीले भिजेर च्यापच्याप भएको थियो । उसलाई पनि स्वर्गीय आनन्द भएछ र मलाई पनि यस्तो स्वर्गीय आनन्द भयो कि त्यस्तो आनन्दको त वर्णन पनि गर्न सकिदैन
हालसम्म पनि हामी चिक्दै आएका छौं तर अहिले मलाई उसको लाडो सानो भएजस्तो लाग्छ । र पहिलेको जस्तो मज्जा आउँदैन । मेरा दुधहरु झोलिएका छैनन् , मेरो चाक ठूलो छ । म ठूलो चाकमा कसिलो टाइट् पेन्ट लगाउँछु र अक्सर पारदर्शी भेष्ट लगाउँछु किनकी मेरा स्तनहरु पोटिला छन, जुन केटाहरुलाई आनन्द आओस् भन्ने मेरो चाहना छ । मेरो पुती कसिलो छ त्यसर्थ मलाई अक्सर गरी ठूलो र ठन्केको लाडो मन पर्छ । केटाहरुलाई देख्ने वित्तिकै मेरो शरीरमा एकप्रकारको सञ्चार भएर आउँछ । उनीहरुको लाडो कत्रो छ होला भन्ने कौतुहलता जागेर आउँछ । म दिनमा सात पटकसम्म चिक्न सक्छु । यदि कुनै दिन चिक्न पाइन भने मलाई खपीनसक्नु हुन्छ र त्यसदिन म लाडोको फोटो हेर्दै मेरो पुतीमा औंला हालेर हस्तमैथुन गर्छु तर कोदालोको वीँड जत्रो लाडो हाल्न पल्केकोलाई केको मज्जा आओस् औंलाले । आजसम्म जुनसुकै केटाहरुले पनि मलाई पछाडिबाट फर्केर हेर्छन् । तपाईं पाठकहरुलाई सन्तुष्टीको लागि मैले एउटा मेरो फोटो पठाएको छु । आशा छ, यहाँहरुले यसलाई मन पराइदिनु हुनेछ
Hey I contact me. I will satisfy u. hotblood.suvas@yahoo.com
contacte me at kccold@gmail.com i have big lado. i wil satify u most